Sidee si ay u gudbiyaan Video ka iPad in Computer
> Resource > iPad > An Easy Xalka in Video beddelashada ka iPad in Computer
Ka sokow videos ka PC gudbaayo iPad u play on go ah, mararka qaar, waxaan u baahan tahay si ay u gudbiyaan videos ka iPad in PC, sidoo kale u gurmad ama tafatir la software xirfad, sida iMovie. Si kastaba ha ahaatee, Lugood kaliya ogolaano videos ka PC wareejiyo iPad, ma ka iPad in PC. Xaaladdan oo kale, si ay video ka iPad wareejiyo computer, waa in aan u leexano barnaamijyadooda kale. Halkan waxaan jeclaan lahaa in aad ku talin Wondershare TunesGo Retro (Windows). Waa awood aad si nuqul video ka iPad in computer si fudud oo ka kaaftoomi si xor ah.
Ka dib markii download iyo rakibi Wondershare TunesGo Retro aad kombuutarka, waa inaad raacdaa tallaabooyinka hoose si aad u barato sida loo wareejiyo videos ka iPad in PC. Haddii aad computer Mac ah leedahay, fadlan isku day Wondershare TunesGo Retro (Mac) si ay u gudbiyaan videos ka iPad si Mac .
Tallaabooyinka Easy in ay u guuraan video ka iPad in computer
Tallaabada 1. Isku aad iPhone la TunesGo Retro
Bilowgii, rakibi barnaamijka on your computer iyo waxa maamula. Connect aad iPhone la via cable USB ah. TunesGo Retro ogaan doonaa iPad mar uu ku xiran. Ka hor inta hoos u qaadan in videos ka iPad gudbaayo computer la Wondershare TunesGo Retro, waa in aad hubisaa in aad ku rakiban Lugood sameeyo. TunesGo Retro kaliya marka Lugood la geliyo.
Tallaabada 2. Transfer video ka iPad in computer
Markaas, guji "Media" in ay leeg- bidix. Daaqadda warbaahinta, guji "Movie" inay soo qaadaan suuqa kala maamulka filimada ee. Dooro videos aad la doonayo oo guji "Dhoofinta in". In liiska hoos-hoos u, doortaan "Dhoofinta in My Computer". Markaas, suuqa kala file browser ah arbushin doonaa. Waxaad dooran kartaa folder kasta si loo badbaadiyo videos kuwan.
Fiiro gaar ah: TunesGo Retro si buuxda u la jaan qaada badan iPad, oo ay ku jiraan iPad mini, iPad bandhigay isha iyo iPad 2.
Kala iibsiga video kaliya ee aad qaadan doona mid ama laba munites. Markaas, video la soo guuriyeen doonaa in computer si guul leh. Ka dib markii in, Marnaba ma u baahan kartaa in aad walwalo tirka video on your iPad lama filaan ah oo iyaga ku raaxaysan to content wadnahaaga.